ယုံကြည်မှု၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်စပွန်ဆာပေးမှု Martech Zone
သောကြာနေ့, မတ်လ 28, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါတက်ရောက်ခဲ့သည့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ကမ္ဘာ, ငါတည်ထောင်သူ Cheryl Viirand နှင့်အတူအများဆုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့ပါတယ် မင်္ဂလာပါ.
Cheryl ၏ဇာတ်လမ်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ သူသည်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောအစားအစာ food ၀ ံဂေလိလုပ်ငန်းကို ၀ ယ်ယူသည့်ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Cheryl သည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်သူမကလေးနှင့်အတူဘေးအန္တရာယ်ကင်းမဲ့။ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသောရောဂါအချို့ခံစားခဲ့ရချိန်တွင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပြissueနာမှာသူမ၏ဘဝနှင့်သူမ၏ကလေး၏ဘဝကိုပျက်စီးစေသောအစားအစာဓာတ်မတည့်မှုနှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုတို့ဖြစ်သည်။
ထိုအခမ်းအနားကာလ၌ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုခံခဲ့ရသည် - ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ချက်အချို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးကိုသိသိသာသာတိုးချဲ့ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အဖေအားသွေးကင်ဆာရောဂါနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူရုန်းကန်နေရသည်။ နောက်နှစ်မှာကျွန်မကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်လာတယ်၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာစွမ်းရည်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ကျောရိုးမှာကျိုးပဲ့ကျိုးတာ ၂ ခုရှိခဲ့တယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်လကမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောင်းလဲသောအခါ၊ ဘင် McCannငါနှင့်အတူ 'ပျော့' 'ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အစားအစာကိုပြောင်းလဲပေးသည့်သူ၏ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်စင်တာတွင်ကျွန်ုပ်ပါဝင်သည်၊ ပရိုတင်းဓာတ်တိုးများလာခြင်း၊ သကြား၊ fructose၊ စတင်ကတည်းကငါပေါင် 50 ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါ့ mobile ပိုကောင်းသည်။ ကွန်ဖရင့်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အများအားဖြင့်နာကျင်မှုမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်သည်ပေါင် ၂၀၀ ခန့်အလွန်များနေသော်လည်း
ပြီးခဲ့သည့်ညက Cheryl နှင့်ငါနောက်ထပ်အံ့သြစရာစကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နေသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်အလွန်အံ့အားသင့်မိကြောင်း၊ မင်္ဂလာပါ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဆက်လက်။ ၄ င်းသည်အစားအစာထိခိုက်လွယ်မှု၊ အစားအစာဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်အစားအသောက်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်ပုံပြင်များ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ ယခုအခါသူသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်းလုပ်ကိုင်နေသည့်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများကကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လည်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမည်သို့တည်ဆောက်လိုသည်ကိုဆွေးနွေးရန်ကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီဟာကကြီးမားတဲ့ပြproblemနာပါ။ ကော်ပိုရေးရှင်းများသည် Cheryl ဆွေးနွေးသောခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်သော်လည်း၊ သူတို့သည် Cheryl ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဘယ်တော့မျှမတူနိုင်ပါ သူတို့ Cheryl လုပ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာကိုတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Cheryl's ကိုဝေမျှဖို့နေရာကိုရောင်းဖို့ပါ။ ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုပြissuesနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကရောင်း ၀ ယ်ဖို့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်ကလှုံ့ဆော်မှုရှိတယ်ဆိုတာပဲ။ ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မည်သို့ပင်ရှိစေ Cheryl လိမ့်မည် အမြဲ be ယုံကြည်စိတ်ချရ နောက်ထပ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည် ကော်ပိုရိတ်စပွန်ဆာ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်သည့်အခါ၎င်း၏လှုံ့ဆော်မှုသည်အမြဲတမ်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရပ်ရွာကိုစပွန်ဆာပေးသည့်အခါ၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိပြီးဆုလာဘ်ဖြစ်သည်။ စပွန်ဆာပေးမှုသည်အခြေခံအားဖြင့်“ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ခေါင်းဆောင်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဤခေါင်းစဉ်ပတ်ပတ်လည်တွင်လုပ်ကိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်သောကြောင့်ထိုအသိုင်းအဝိုင်းကိုကြီးထွားလာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးလိုသည်။ ”
Cheryl သည်ရပ်ရွာကိုကြီးထွားစေလိုပြီး၎င်းအား ဆက်လက်၍ တိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေရှာသည်။ Cheryl ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသူများ၏အကူအညီဖြင့်သူမ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်လူထု၏စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကိုငွေကြေးအမြောက်အမြားမြှင့်တင်ပေးပါ။ Cheryl ၏ပလက်ဖောင်းနှင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏တန်ဖိုးသည် click-through ကြော်ငြာဖြင့်ပေးသောငွေမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် Cheryl ရှိသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သူမကျရှုံးနိုင်ခြင်းအတွက်ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်သည်ယခု Cheryl ၏ဘဝနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေပြီးသူမသည်ဤပြissuesနာများအတွက်အခွင့်အာဏာအမြဲတမ်းရှိမည်ဖြစ်ပြီးသူမ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုမျှဝေရန်အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်လိမ့်မည်
IMO, က အသိုင်းအဝိုင်းမန်နေဂျာ အမှတ်တံဆိပ်၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်သည့်အခါကမျှအောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါ။ အသိုင်းအဝိုင်းများသည်အမှတ်တံဆိပ်များမဟုတ်ဘဲဗဟိုပြproblemsနာများ၊ ယုံကြည်မှုများ၊ နိုင်ငံရေး၊ ဝါသနာများနှင့်စွမ်းရည်များကိုအဓိကထားကြသည်။ Cheryl သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကျရှုံးမည်ဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်လှုံ့ဆော်မှုသည်ကွဲပြားသောကြောင့်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ စားသုံးသူများသည်တွန်းအားကိုတစ်မိုင်အကွာတွင်အနံ့ခံနိုင်သည်။ အခွက်တဆယ်နှင့်အတူမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှတဆင့် Cheryl သိကြလိမ့်မည် မင်္ဂလာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုစောစောစီးစီးထိုကဲ့သို့သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုထောက်ပံ့ရန်မှာ ၀ ယ်ယူရမည့်စပွန်ဆာဖြစ်လိမ့်မည်။
မှတ်စု: တက်ရောက်ရန် သင်၏စားပွဲမှလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ္ဘာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate link ကိုအသုံးပြု။ ကို virtual pass နှင့်အတူ!
Social Media သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရွှေတွင်းဖြစ်သည်
မတ်လ 28, 2014 မှာ 10: 37 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်, ငါ # smmw13 တွင်ချယ်ရီနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူမသည်အစားအစာကန့်သတ်ချက်များနှင့်နေထိုင်သောလူများသည်အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ ချဉ်းကပ်ပုံကိုပြောင်းလဲသွားတော့မည်ကိုသံသယမရှိပါ။ သူမ၏ #customeater လှုပ်ရှားမှုသည်သင်သိသည့်အတိုင်းစိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ကောင်းသော (သင်၏ယခုအောင်မြင်မှုအတွက်သင့်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါ)! Cherry လိုလူတွေထက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနည်းပါးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုကျွန်တော်သဘောတူပါတယ် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။ သို့သော်အမှတ်တံဆိပ်များတည်ဆောက်သည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသည်ရောင်းရန်အတွက်သာမဟုတ်ပါ၊ နောက်လိုက်များနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးရှိလိုသည့်အကြောင်းရင်းအတွက်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောထောင့်တစ်ခုအမြဲတမ်းရှိတတ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကအလေ့အထကိုစွန့်ခွာပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသောဆရာ ၀ န်များအားသူတို့အသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးအပေါ်ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိပါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် Cherry Viirand ကဲ့သို့တုပ။ မရသောစိတ်ဝိညာဉ်များကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခွင့်အာဏာမျိုးနှင့်အမြဲတမ်းမတူနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့အားထောက်ခံသူများနှင့်စပွန်ဆာများအနေဖြင့်သင်အကြံပြုထားသည့်နေရာ၊ သို့မဟုတ် guest ည့်ဘလော့ဂ်များနှင့်၎င်းတို့၏လက်လှမ်းမီမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းလည်းရှိသည်။ RTs နှင့် + 1s ။ ဒါပေမယ့်စိတ်အားထက်သန်တဲ့လူတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိပြီးစမတ်တံဆိပ်တွေကသူတို့ကိုရှေ့တန်းဗဟိုနေရာမှာထားတယ်။ သင်သဘောတူမလား
မတ်လ 29, 2014 မှာ 2: 02 AM
Great post Doug .. ဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 29, 2014 မှာ 4: 21 AM
မတ်လ 30, 2014 မှာ 12: 15 AM
မတ်လ 30, 2014 မှာ 9: 23 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ကောင်းမြတ်မှု၊ Doug - ကျွန်ုပ်အလွန်ချော့မော့ပြီးသင်၏ကြင်နာသောစကားများအတွက်သင့်အားလုံလောက်စွာကျေးဇူးတင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးကိုသင်ကိုင်တွယ်ပုံသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည် - စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုယူပြီးပထမဆုံးဘောလုံးလှိမ့်ခြင်းကိုရရှိခြင်းသည်အလွန်စိတ်ရောကိုယ်ပါစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲ၍ မရသောထင်ရလောက်သောကျန်းမာရေးစိန်ခေါ်မှုများမှပြန်လည်ရယူရန်ပြောင်းလဲနေပြီးသင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူပါ ၀ င်နေပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သောမီဒီယာကိုကျွန်ုပ်၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုချေးငှားရန်အတွက်ကန ဦး beta စတင်ခြင်း မှစ၍ အထူးစားသောက်ကုန်ဘလော့ဂါများနှင့်“ အခမဲ့ -” စားနပ်ရိက္ခာနေရာမှအကြီးမားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အချို့ပေါ်ထွက်လာခြင်းကထူးခြားသည့်ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိလေသာများနှင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြသောအခါအခြားသူများသည်လိုက်နာရုံသာမကသင်နှင့်အတူရပ်။ အတူတကွရပ်တည်ကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အတွက်အထူးသင်ခန်းစာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဧပြီ 3, 2014 မှာ 8: 10 AM